LibreOffice 7.1 Tonga miaraka amin'ny Split Edition, endri-javatra andrana ary maro hafa | Avy amin'ny Linux
Ny Document Foundation dia nanambara ny fanombohana ny ny kinova vaovaon'ny suite an'ny birao LibreOffice 7.1. Ho fanomanana ny fandefasana dia 73% ny fanovana nataon'ireo mpitantana ny tetikasa toa ny Collabora, Red Hat, ary CIB, ary ny 27% ny fanovana dia natolotry ny mpankafy tsy miankina.
Ao amin'ny kinova vaovao, ireo mpandinika dia nandinika ny hevitra hizara azy ireo ho fanovana eo amin'ny fiaraha-monina ("LibreOffice Community") ary fianakavian'ny vokatra ho an'ny orinasa ("LibreOffice Enterprise"). Ity kinova LibreOffice 7.1 ity dia misy soratra hoe "Community", hotohanan'ireo mpankafy azy ary tsy natao hampiasaina amin'ny raharaham-barotra.
Ho an'ny orinasa dia soso-kevitra hampiasa ny vokatra avy amin'ny fianakavian'i LibreOffice Enterprise, izay hanohanan'ny orinasa miaraka azy ny fanohanana feno sy ny fahaizana mandray fanavaozana maharitra (LTS). LibreOffice Enterprise dia hampiditra endri-javatra fanampiny toy ny SLA (fifanarahana haavo serivisy).
Ny kaody sy ny fizarana dia mitoetra ihany, ary ny LibreOffice Community dia misy tsy misy fetra ho an'ny rehetra tsy an-kanavaka, ao anatin'izany ireo mpampiasa orinasa.
Manampy ny famenon'ny fianakaviana Ny LibreOffice Enterprise dia hanatsotra ny asan'ny mpamatsy ivelany ny vokatra natsangana tamin'ny LibreOffice ho an'ny orinasa ary hanamaivana ny vesatry ny fiarahamonina izay mandany ny fotoanany hamahana olana mifandraika amin'ny fomba fampiasana LibreOffice amin'ny tontolon'ny orinasa.
Vokatr'izany dia hatsangana ny ekôzistia mpamatsy Manolotra serivisy fanampiana ara-barotra izy ireo ary fandefasana LTS ho an'ireo orinasa mila serivisy toy izany.
Community LibreOffice ary ny fianakavian'ny vokatra LibreOffice Enterprise dia mifototra amin'ny sehatra teknolojia LibreOffice Technology mahazatra, izay miasa ho toy ny kaody tokana amin'ny famoronana vahaolana maro mifototra amin'ny LibreOffice. Ity kaody kaody iraisana ity dia hanaiky ny fanovana izay samy mahaliana ny fiaraha-monina sy ny orinasa manokana.
Ny vokatra mifototra amin'ny teknolojia LibreOffice dia misy amin'ny fananganana ho an'ny rafitra miasa mahazatra (Windows, macOS, Linux, ary ChromeOS), sehatra finday (Android sy iOS), ary ampiasaina ho serivisy rahona (LibreOffice Online).
Ny vokatra ao amin'ny fianakavian'i LibreOffice Enterprise dia azo omena amin'ny anarana samy hafa, miankina amin'ny marika an'ny mpanamboatra.
LibreOffice Community 7.1 Endri-javatra vaovao lehibe
Ao amin'ny kinova vaovao napetraka ny fanohanana ny maodelin'ny irery fipetrahana isam-paritra (fanamarihana ny tsipelina sy ny toerana hafa momba ny antontan-taratasy vaovao dia miankina amin'ny fiteny voafantina ao amin'ny Mpanoratra, fa tsy amin'ny faritra misy ny rafitra).
Nanampy maody mivalona fanodinana contour, rehefa alefa, ny bokotra iray misy zana-tsipìka dia miseho eo akaikin'ny lohateny voafantina ao amin'ilay rakitra. Ny tsindry mahazatra amin'ny bokotra iray dia mampihena ny lahatsoratra mankany amin'ny lohateny manaraka, ary ny tsindry havanana dia manaparitaka ny atiny rehetra mankany amin'ny lohateny ambaratonga iray, anisan'izany ny dikanteny.
Raha te hampandeha azy dia tsy maintsy alefanao aloha ny fanohanana ireo asa fanandramana amin'ny alàlan'ny menio «Safidy Fitaovana ▸ LibreOffice ▸ Advanced», avy eo ampandehanana ny maody amin'ny alàlan'ny «Fitaovana ▸ Safidy ▸ Mpanoratra LibreOffice ▸ Hijery ▸» Asehoy ny bokotra fahitana ny votoatiny ».
Nisy dinika "Additions" vaovao nampiana, izay ampiasaina amin'ny faritra maro ao amin'ny LibreOffice hamoahana atiny fanampiny avy amin'ny tahiry ivelany, toy ny extensions, icon, macros, na modely. Ny boaty fifanakalozan-kevitra dia manafoana ny filàna misintona sy mametaka ireo fanitarana amin'ny alàlan'ny Extension Manager, mamela anao hahita sy hametraka extensions amin'ny tsindry iray.
Mikasika ny fanovana Soraty:
Ny Style Inspector dia nampiana izay mampiseho ny toetra rehetra ho an'ny fehintsoratra sy ny toetra amam-panahy, ary koa ny fananana fanaingoana amin'ny tanana.
Azonao atao izao ny manantona ireo endrika mifandraika amin'ny faran'ny pejy.
Ao amin'ny menio «Fitaovana ▸ Safidy ▸ Mpanoratra LibreOffice ▸ Fitaovana fanampiana» azo atao ny mamaritra ny fomba fitehirizana default amin'ny sary nampiana.
Manome detection karazana Unicode, na dia manafatra rakitra an-tsoratra tsy misy marika byte (BOM) aza.
Niampy fanohanana ny raikipohy latabatra (ho an'ny portability amin'ny MS Word): PRODUCT, ABS, SIGN ary COUNT.
Nanampy ny fahaizana manodina ny fahitana ireo anaran'ny saha fidirana (Jereo ny names Anaran-tsaha) ary manohana ny fisafidianana saha tsy misy poizina miaraka amin'ny totozy. Ho an'ny saha mifanentana amin'ny Word, misy switch misy hanafina ny baiko sy ny vokany.
Mikaroha sy manolo fanatsarana ny fampisehoana.
Ho an'ireo antontan-taratasy PDF taloha noforonina tao amin'ny OpenOffice.org 2.2 sy ny taloha, ny import dia manova ny latabatra miorina ho latabatra andalana, izay ahondrana tsara indrindra amin'ny endrika MS Word sy HTML.
Avy amin'ny fanovana ao amin'ny Calc:
Nanisy toe-javatra iray hanakanana ny fametahana amin'ny alàlan'ny fanindriana Enter (Fitaovana ▸ Safidy ▸ LibreOffice Calc ▸ General).
Ao amin'ny varavarankely AutoFilter, azonao atao ny misafidy zavatra amin'ny alàlan'ny fanindriana ny tsipika rehetra, tsy ny kisary fifantina ihany.
Ny bokotra "Reset All" dia nampiana tamin'ny fifanakalozan-kevitra an'ny Solver.
Fanatsarana ny famenoana sela mitambatra, fisafidianana ary kopian'ny firafitry ny sela mitambatra.
Ny fiasa INDIRECT izao dia manana fanohanana anarana voafetra amin'ny takelaka misy ankehitriny.
Fanatsarana fanatsarana ny fizahana ny tsipelina sy ny fikarohana ao amin'ny Autofilter.
Fiovana amin'ny fiheverana sy sary:
Nanampy fanampiana ho an'ny sarimiaina miorina amin'ny motera ho an'ny simika fizika, ary nampiditra vokarin'ny sarimiaina vaovao toy ny drop simulated, fade, ary ny bouncing raha misy ny fifandonana.
Ao amin'ny Draw ho an'ny fisie PDF natsofoka, nampiana famantarana hita fa vita sonia nomerika ilay rakitra.
volana mamela anao hanova ny sarimiaina zavatra maromaro indray mandeha.
Math manampy santionany vaovao amin'ny tontonana Element ary manome fanohanana feno ho an'ny lokon'ny HTML, ny sasany amin'izy ireo dia azo fidina amin'ny alàlan'ny interface ao amin'ny panne Element.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Tonga ny LibreOffice 7.1 miaraka amin'ny Split Edition, endri-panandramana ary maro hafa
Google dia manolotra ny fivoaran'ny asany amin'ny fomba hafa hisolo ny cookies fahatelo